नेपाली चेली रेस्लर मुना श्रेष्ठले भारतलाई हराउदै राखिन् कृतिमान – PathivaraOnline
Home > खेलकुद > नेपाली चेली रेस्लर मुना श्रेष्ठले भारतलाई हराउदै राखिन् कृतिमान
नेपाली चेली रेस्लर मुना श्रेष्ठले भारतलाई हराउदै राखिन् कृतिमान
admin March 6, 2021 खेलकुद, समाचार	0
नेपाली चेली मुना श्रेष्ठले “powerful women championship award” हात पारेकी छिन। भारतिय खेलाडी लाई हराउदै रेस्लिङ मा उनले उक्त बेल्ट हात पारेकी हुन। यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस । बिजय पश्चात बोल्दै मुनाले अब देशभर खेलाडी जन्माउने अभियान मा लाग्ने बताएकी छिन। उहँको हौसला स्वरुप यो समाचार लाई share गर्नुहोला।
UWE ultimate wrestling entertainment Pvt. Ltd. को आयोजनामा आज फागुन २२ गते शनिबार दिउसो १ बजे दसरथ रंगशालामा भएको इन्डिया र नेपालको कुस्ती प्रतियोगितामा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मुनाले बिजयी हासिल गरेकि हुन् । महिला रेस्लर मुना श्रेष्ठ लगायत अन्य देशभक्त नेपाली खेलाडीहरुले भाग लिदै हुनुहुन्छ । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस
हाम्रा खेलाडीहरुको मनोबल बढाउनको लागि सक्ने र भ्याउने जति सबै उपस्थित भैदिनु होला। मुना श्रेष्ठ लगायत टिमलाई जितको अग्रिम बधाई तथा शुभकामना साथ र सहयोगको लागि शेयर गरौ ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गतको महिला क्रिकेट सोमबारदेखि पोखरा रङ्गशालामा सुरु भएको छ ।पहिलो दिन भएको खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई १० विकेटले पराजित ग¥यो । यसो त यो खेल माल्दिभ्सको पहिलो अन्तराष्ट्रिय खेल थियो ।पहिलो खेलमा नेपालका लागि डेब्यू गरेकी खेलाडी अञ्जली चन्द खेल सकिएपछि चर्चामा आइन् । कारण थियो नयाँ विश्व कीर्तिमान । उनले २.१ ओभर बलिङ गर्दै कुनै रन खर्च नगरी ह्याट्रिकसहित ६ विकेट लिइन् ।
२५ वर्षीया उनको यो प्रदर्शन क्रिकेट जगतमै निकै सम्झनलायक मानिएको छ ।हामिसँगको भेटमा उनले आफूले नसोचेको उपलब्धि हासिल गरेको बताइन् । टोलिमा परे पछि उनले सोचेकी थिइन् – ‘विकेट लिएर मेरो कला देखाउँछु ।’राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गर्न पाएपछि निकै खुसी लागेको र किर्तिमान रच्दा त झन् खुसी बढेको प्रतिक्रिया दिइन् । तर, उनको यो प्रदर्शन सजिलै भने हासिल गरेकी हैनन् ।विवाह बन्धनमा बाँधिएको चार वर्षपछि उनले क्रिकेटमा पुनरागमन गरिन् र नयाँ किर्तिमान राख्न सफल भइन् । अञ्जली पहिलो खेलमा उमन अफ द म्याच पनि घोषित भईन् ।
उनले नेपाली महिला क्रिकेटमा धेरै समस्या देखेकी छन् ।नेपाली क्रिकेटका लागि सरकारले महिला क्रिकेटरका लागि पनि पुरुषको जतिनै सेवा सुविधा दिनु पर्ने र अझ बढी महिला क्रिकेटका घरेलु लिगलाई बढावा दिनु पर्ने ठान्छिन् ।नेपाली महिला क्रिकेट अझै पनि सरकारको आँखामा पर्न नसकेको अञ्जली बताउँछिन् । क्रिकेट अझै जीविकोपार्जनको माध्यम बन्न नसकेको उनी गुनासो गर्छिन् ।सीप नभएका कारण क्रिकेट छाड्दा अरु पेशाको लागि अयोग्य पनि हुने र क्रिकेटले जिविकोपार्जन सम्भव नभएकाले क्रिकेटरको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आज आइतवार सुर्यदेवको दिन, देवको आराधना गरे सुखमय र लाभदायक दिनको शुरुवात हुने!
आज सदन अवरोध हुन सक्ने ओली समुहको छलफल
सम्पादक शाहमाथि फिल्मी शैलीमा यस्तो साङ्घातिक हमला! के छ हमलाको भित्री रहस्य ?
धरानमा २८ वर्षदेखिको कम्युनिष्ट किल्ला तोडियो, मेयरमा नेपाली कांग्रेस विजयी
यसरी शक्तिशाली बन्दै नेपाली सेना, के गर्ला अब भारतले?
भारतिय नागरिकले वा सिन्दाले नेपाल प्र हरी मा थि ढु ङा मु ढा गरे प्र हा र (भिडियो हेर्नुस्)
के गीता कपूरले बिहे गरेकी हुन्? सिन्दुर पोते लगाएका तस्वीर बाहिरिएसँगै आयो यस्तो जानकारी